Maitiro ekuvanza chiziviso icon pane iyo Apple Tarisa | Ndinobva mac
Maitiro ekuvanza chiziviso icon paApple Watch
Pane zvakawanda zvingasarudzwa zviripo paApple Watch zvatiri kuwana zvishoma nezvishoma uye ndezvangu pachezvangu ndinofanira kutaura kuti ndakanga ndisingazive iyi sarudzo yekugona kuviga chiziviso icon pane wachi, hongu, iro diki diki doti rinoonekwa pane chikamu chepamusoro cheawa patinenge tiine imwe kana kupfuura notices dzisina kuverengwa. Zvakanaka yambiro yekuona iyi inogona kumisikidzwa kana kuremedzwa sekuda kwedu nenzira yakapusa kwazvo kubva pane zvingasarudzwa neApple Watch application.
2 Maitiro ekuvanza chiziviso icon
Maitiro ekuvanza chiziviso icon
Ichi ndicho chiratidzo chinowoneka pachiratidziro patinogamuchira kumeso kwewachi uye chiziviso chatichabvisa pachiratidziri. Iyi tsvuku poindi inogona kumisikidzwa kana kuremedzwa kuitira kuti irege kuoneka kana tiine maappreads asina kuverengwa, kureva kuti, tinogamuchira zviziviso zvakadaro, tinogona kuzviona izvozvi asi denderedzwa harizooneswa pachiratidziri. Kuti tiite izvi isu tinofanirwa kutevedzera nhanho nhatu dziri nyore: Isu tinovhura iyo Apple Watch kunyorera pane iyo iPhone, tinya pane Yangu yekutarisa sarudzo uye Notification, deactivate chiziviso chiratidzo uye ndizvozvo.
Nenhanho nhatu idzi takamisa chiratidzo chitsvuku izvo zvinoonekwa kana tisina kuverengwa ziviso pane yedu Apple Tarisa. Zviripachena, kana isu tichida kuve neichi chiziviso icon pane iyo skrini zvakare, zvese zvatinofanirwa kuita kumisikidza iyo chiratidzo zvakare pane iyo iPhone uye ndizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuvanza chiziviso icon paApple Watch
Uye matanho ari ???? Rrrrrrrr dhiramu roll ...
Pindura kune albertoglezc
Ini ndinotora mazwi emunyori uyu: «Kuti tiite izvi isu tinofanirwa kutevedzera nhanho nhatu dziri nyore: vhura iyo Apple Tarisa application pane iyo iPhone, tinya pane Yangu yekutarisa sarudzo uye paZiviso, deactivate chiziviso chiratidzo uye ndizvozvo. Nenhanho nhatu idzi takabvisa chiratidzo chitsvuku ... »Alberto, unofanirwa kuverenga zvinyorwa zvese, kuti usazoda madhiramu. Shuwiro yakanakisa!!
Ehe, Jose ... Munguva yakapfuura zviri nyore kwazvo kutaura ... Kunze kwekuti pandakaverenga chinyorwa chakacherechedzwa kuti nekukanganisa chikamu chakashongedzwa chakabviswa kana kuti chakashaikwa ...
Ndiro dambudziko rekutumira makomendi, kuti gare gare kana vakachinja chinyorwa kana kuchigadzirisa, mumwe anoita kunge benzi
Bhadhara panzvimbo yegasi neApple Pay kubva kuJaguar yako
250 Mapeji matemplate asingasviki euro